Portrait Nandrianina | Grandir à Antsirabe
PORTRAIT : “Assistante administrative” sy mpanentana amin’ny fidinana an-dalambe amin’ny alina no nanombohan’I Nandrianina niasa niaraka tamin’ny fikambanana. Amin’izao fotoana izao izy dia mitety an’Antsirabe ary manontany ny hevitry ny olona momba ny fahitan’izy ireo ny ankizin’ny lalana.
Nandrianina, amin’izao fotoana izao dia ianao no miandraikitra ny fanentanana ny mponina sy vondrona. Ahoana ny momba izany?
Manana vina ny hametraka tambazotram-pifandraisana maro samihafa izahay mba ahafahana manentana olona maro hiady ho an’ny ankizin’ny lalana. Arak’izany dia nanomboka tamin’ny fanaovana fanadihadiana teto amin’ny tananan’Antsirabe izany. Ny maraina aho no mihaona amin’ireo mponina ary mametraka fanontaniana maromaro azy ireo. Ny tapany hariva kosa aho no mampiditra ireo valin’ny fanontaniana mba ahafahana manomana ny fomba fiasa avy eo. fa namorona ny fivondronan’ireo mpilatsaka antsitra-po ihany koa izahay mba hanampiana ireo mpanabe miandraikitra ny hetsika atao andavanandro, ka izaho no miandraikitra ny fandraisana azy ireo. Mino izahay fa izy ireo no ho lasa mpitondra tenin’ny fikambanana amin’ny sehatra misy azy ireo tsirairay.
Inona no nahatonga anao hisafidy ny hiasa ho an’ny Grandir à Antsirabe?
Te hanampy ireo zaza sahirana aho.
Inona ny fahatsiarovana tsara indrindra niainanao teto anivon’ny fikambanana?
Tsy ankisalasalana no hamaliako hoe ny fihaonana voalohany tamin’ireo ankizy nandritran’ny fidinana an-dalambe amin’ny alina. Ny fomba nadraisan’izy ireo ahy no tena nanohana ahy.
Inona no tianao hainan’ny fikambanana ho an’ireo taona ho avy?
Manantena aho hoe tsy hisy intsony ny ankizin’ny lalana eto Antsirabe. Izany akozy tsy midika hoe tsy hisy intsony ny fikambanana fa kosa nahatanteraka ny nofiny izy ary afaka manampy olona hafa indray.
Lire aussi : Portrait Mathilde
Ampahafantaro anay ary hoe ohatry ny ahoana ianao, raha biby ianao dia inona?
Tiako raha mba vorona aho (Manidina!), afaka mandinika ny zava-mitranga eny ambony eny mba ahafahana mandray andraikitra haingana.
Ary raha film ianao?
Amin’ny maha “romantique” ahy, The choice no safidiko; tantaram-pitiavana teo amin’ny olona anankiroa, tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra sarotra ilay lehilahy : tokony esoriny ve ireo fanafody fitazoman’aina ny vadiny izay niaran-doza ary miady amin’ny fahafatesana?
Raha sakafo indray ary e?
Tena tiako ny “cafés gourmands” ary io fifangaroana io dia hitako tena mety. Tsy miaingitraingitra ihany koa aho.
Ny toetra tsara sy toetra ratsy?
Somary misy fireharehana kely aho ary tsy mamela heloka mora foana. Nefa kosa mora hifandraisana aho ary tsy sarotiny.
Ity ny ahy : “Tsy ho tanteraka mihitsy ny nofy iray raha tsy mitsemboka ho an’ny fanatanterahana izany ianao”
Ary raha fofona?
Chanel n°5. Tamin’izaho mbola kely dia nomen’ny nenibeko tavoahangy kely fanandramana an’ity ranomanitra malaza ity aho. Nampiasampiasaiko foana teny ilay izy satria tsy mbola fantatro ny tena lanjanay, amin’izao aho manenina (hehy!)
Iray amin’ireo fahatsapana dimy?
Ny fahitana. Satria io no ampiasaina voalohany rehefa mihaona amin’ny olona voalohany.
Teny farany hamaranana azy?
Faranako amin’ny hoe tsy tokony hionona amin’izay efa azony. Tokony hiezaka ny hioitra hatrany. Tsy tokony hadinoina ihany koa fa arakaraky ny mahamaro antsika no ahavitantsika zavatra lehibe.
Andiany faha 3 amin’ny fampisehoana mozika nataon’ny ankizy tao amin’ny Alliance Française Antsirabe
Roa andro ho an’ny fanentanana sy fifampizarana Ny 28 sy ny 29 jona lasa teo no nanatanterahana ny andiany faharoa tamin’ilay hetsika « forum des associations » karakarain’ny tambazotra OSCAPE. Roa andro nanomezana tombony ho an’ny fifanakalozana sy fifampizarana ary...
→ Protection des enfants des rues
→ Développement local
→ Activités Génératrices de Revenus
FAMPANDROSOANA IFOTONY	Asa ifanomezan-tanana 2018 : Mpiofana injeniera fr…